FAKAFAKA: Resaka kolontsaina io ! | NewsMada
FAKAFAKA: Resaka kolontsaina io !
Ekena, ilaina ny fahaizana fa tsy afa-mandeha irery raha mikendry ny hampandroso firenena. Na manaka-danitra aza ny diplaoma, tsy misy ilana izany raha mbola ankilabao ny kolontsaina. Tsy maka lavitra fa tranga misy sy iainan’ny firenena tao anatin’ny taona maro izany. Firenena mitana ny rambony maneran-tany i Madagasikara kanefa anisan’ireo manana manampahaizana maro amina sehatra samihafa. Sanatria, ireo ve no tsy mampiasa ny fahaizany? Tsia , misy manao ny ainy sy ny hainy tsy ho zavatra mihitsy ireo. Miasa mafy, mikaroka tsy miato, sns.
Matoa mbola marobe ny olana goavana tsy voavaha eto Madagasikara, tsy mitohoka amin’izany ny vahaolana na ny fepetra hasetry azy ireny. Sanatria, sanatria, sanatria hisy sahy hilaza ve hoe : « ny manampahaizana malagasy no tsy mahay » ? Tsia, tena mahay ireo matoa tambazan’ny firenen-kafa vola be mba hijanona hiasa any aminy.
Mila olona manam-panahy i Madagasikara. Io rahateo no maha olona, hoy ny fahendren’ny razana. Resaka kolontsaina ranoiray ny fananam-panahy fa tsy itakiana fahaizana sy diplaoma be. Ny olona rehefa manam-panahy, mahafantatra ny rariny, ny hitsiny, matahotra an’Andriamanitra Andriananahary, mataho-tody, mahay misoroka ny tsiny tsy ho avy, mahay mifanaja, mitandrina ny tsy ho voahozona sy tsy ivangongoan’ny alahelon’ny hafa, sns.
Avy amin’io fananam-panahy sy fahafantarana ny kolontsaina io ny fototra hanaingana ny fampandrosoana rehetra. Amin’izay fotoana izay, ho fantatry ny Malagasy fa azy ity Nosy ity sy ny momba azy manontolo ka adidiny ny mampandroso azy. Ho voahaja avokoa ny fady ka tsy hidiran-doza ny Malagasy, tsy hitrangan’antambo i Madagasikara ! Hiverina ny hasina ananan’ity tany ity !